Rayidka iyo ururada haweenka Puntland oo ku baaqay in la isugu tanaasulo khilaafka jira (Dhegeyso) – Radio Daljir
Rayidka iyo ururada haweenka Puntland oo ku baaqay in la isugu tanaasulo khilaafka jira (Dhegeyso)
Diseembar 18, 2013 3:32 b 0
Boosaaso, December 18, 2013 – Urrurada bulshada iyo kuwa haweenka Puntland ayaa ku baaqay in la dejiyo xaalada siyaasadeed ee xiligan ay ku jirto Puntland, taas oo ah wakhti kala guur ah isla markaasna uu khilaaf ka dhex aloosan yahay madaxweynaha iyo musharixiinta.
Radio daljir oo maanta daweynaha weydiisay sida ay u arkaan shirkii lagu kala tegay ee shalay ee musharixiinta iyo madaxweynaha, waxaa ay dadweynuhu ku baaqeen in la joojiyo khilaafka, iyagoo madaxweynaha ka codsaday inuu tanaasulo.
Qaar kale oo dad ka mid ah ayaa ku baaqay in la wada tanaasulo oo xal buuxa laga gaaro guddiga Ansixinta iyo xalinta khilaafaadka ee Puntland oo madaxweynuhu magcaabay, dadweynaha ayaa dalbaday inaan la lumin hanaanka maamul iyo kan dowladnimo ee hadda jira.
?Madaxweynuhu ha u tanaasulo arrinta la isku hayo, musharixiinta wax ha ka siiyo guddiga markaas ayaa xal la gaarayaa iyo sida la rabo.? Ayuu yiri Maxamed Cali Julay oo ka mid ah rayidka ay daljir maanta wax weydiisay.
Gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Bari Maryan Maxamed Xasan Guduudo oo iyana maanta la hadashay radio daljir, waxay ku baaqday in dadka reer Puntland ay u baahan yihiin horusocod iyo xal laga gaaro wax kasta oo la isku hayo, waxay ku baaqday isu-tanaasul.
?Haweenku waxay doonayaan musharixiinta iyo madaxda hadda jirta inay muujiyaan kala dambayn, in danta gaar ahaaneed meel la dhigto oo danta guud laga shaqeeyo iyo nabada xiligan jirta.? Maryan Guduudo ayaa intaas ku dartay.?Yaan la kala tegin ha la isu noqdo oo xal ha la gaaro.?
Guud ahaan bulshada qaybaheeda kala duwan iyo ururrada haweenka waxay ku baaqeen Isimada in la dhex-galo musharixiinta iyo madaxweynaha si looga fogaado carqalad iyo dhibaato kacda xiligan kala guurka ah ee lagu jiro, ilaa haatan xal lagama gaarin khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo musharixiinta.
Dhegeyso: – Gudoomiye Maryan Guduudo oo u warantay Faadumo Taxadar oo daljir ka tirsan?
Rag hubaysan oo 4 dhaqtar oo saddex tahay Syrian maanta ku dilay deegaanka Siinka-dheer (Dhegeyso)